ကူညီပါအုံး — MYSTERY ZILLION
wordpressနဲ့ရေးထားတာပါ အကီနိုသိချင်တာက wordpressမှာ cboxကိုဘယ်လိုထည့်ရတာလဲ နောက်ပြီး web master မှာ ဘလော့လာကြည့်တဲ့သူတွေရဲ့တိုင်းပြည်တွေ browser တွေကြည့်လို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရလဲသိချင်လို့ဖြေပေးကြပါနော်။
ဒီနေရာကို တစ်ချက်သွားကြည်ပါ။ http://www.mysteryzillion.org/forums/showpost.php?p=13836&postcount=10 ဗမာလိုရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေထင်ပါတယ်
တိုင်းပြည်တွေဘာတွေသိချင်တာဆိုရင်တော့ သူများအလကားပေးတဲ့ဟာ တစ်ခုခုကိုယူသုံးလိုက်ပါ။ ဥပမာ။ http://www.statcounter.com/ အဲ့ဒီကောင်ကတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးပါပဲ Wordpress ထဲကိုဘယ်လိုထည့်သလဲကတော့ အဲ့ဒီဆိုက်မှာပဲ ရေးပြထားပါတယ်။ သူ့ Forum ကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါ MZ နဲ့ပုံစံတူသုံးထားပါတယ်။ တစ်ခြားဆိုက်တွေကလည်း အများရှိရှိပါတယ်။ ဘာတွေလည်းသိချင်ရင်တော့ ကိုဂူဂဲကို web hit counter, free website counter ဒါမျိုးတွေနဲ့အော်မေးလိုက်ပါ သူကနားမထောင်ချင်လည်းမရဘူး လိပ်စာတွေ တစ်ပုံကြီးပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒါက လာလည်တဲ့ လူတွေရဲ့ နိုင်ငံတွေကြည့်ဖို့
ကူညီပါအုံးဆိုပြီး နောက်ဆို ခေါင်းစဉ်မတပ်ပါနဲ့ဗျာ... ဖြေရတဲ့သူတွေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင် ခေါင်းစဉ်ကို တိတိကျကျလေး လုပ်ပေးပါလား ။ အခုဟာဆို wordpress မှာ cbox ထည့်ချင်လို့ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးဆို ပိုပြီး ရှင်းလင်းသွားမှာပါ။
၁၅။ Thread အသစ်တင်ရာတွင် အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းပြီး ထိရောက်သော title သာပေးရန်။ ဥပမာ -- Virus ထိနေတယ်ဆိုလျှင် ဘာ virus မှန်းမသိပါ။ Love Virus ထိနေတယ်လို့ ရေးထားလျှင် ဖြေရမည့်လူအတွက်လည်း ချက်ခြင်းသိနိုင်မည်။ ထို့ကြောင့် အဖြေလည်း မြန်မြန်ရနိုင်သည်။
အကီနိုလည်းပြောတဲ့ အတိုင်းလိုက်လုပ်ကြည့်တာပဲ word pressက Appearance ထဲကwidgets
က text ထဲမှာထဲ့ဆိုပြီးထည့်တာ မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ themes ကြောင့်လား။ ကူညီကျပါအုံးနော်။
ဟုတ်ပြီ စာကိုဖတ်ပြီးသေသေချာချာ စမ်းနေတာသေချာတယ်။ ဒါကြောင့် အသေအချာပြန်ဖြေပေးမယ်။ တစ်ချို့ဟာတွေက အဲ့သည်လိုဖြစ်တတ်တယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ်တိုင်ပဲပြင်ရလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဆိုက်ထဲက wp-content\_themes ထဲက ကိုယ်သုံးထားတဲ့ themes folder ထဲက sidebar.php ဆိုတာကို ပြင်ရလိမ့်မယ်။ FTP တစ်ခုခုနဲ့ ကိုယ့်စက်ထဲကိုကူးယူလိုက် ဒါမှမဟုတ် Wordpress Admin ထဲကနေလည်း ပြင်လို့တော့ရတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုပဲပြင်တယ် Wordpress ကိုမသုံးဘူး။ အဲ့ဒီဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက် အထဲမှာ <div> ... </div> ဆိုတာမျိုးတွေ တွေ့လိမ့်မယ်။ စာကိုနည်းနည်းဖတ်ကြည်လိုက်ရင် ဘယ် <div> ကကိုယ်ဆိုက်ထဲကဘာဆိုတာ သိသာပါတယ်။ ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့နေရာမှာ <div> ? </div> တစ်ခုထည့်ပြီး အလည်က ? နေရာမှာ ကိုယ်ထည့်ရမယ် Code ကိုကူးထည့်လိုက်ဗျာ။ တစ်ခုတော့ရှိတယ် အပေါ်က <div> တွေကိုတော့ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဦး <div ????> ထဲမှာတစ်ခြားဟာတွေပါတတ်တယ် class တို့ဘာတို့။ ပါတယ်ဆိုရင် တူအောင်တော့ ထည့်ပေးလိုက်ပါဗျာ။ တော်ကြာနေ အသစ်ထည့်ထားတာက အထက်ကဟာတွေနဲ့ Style မတူပဲကွဲထွက်နေဦးမယ်။ ပြီးရင်တော့ ကိုယ့်ဆိုက်ထဲက အဟောင်းကို ပြန်ဖျက်ပြီး ပြင်ထားတဲ့ဟာကို တင်ပေးလိုက်။ ဒါဆိုရင်ရပြီ။ တစ်ခုတော့ သတိထားနော် အဲ့သည်လိုပြင်ထားရင် Theme ပြောင်းလိုက်ရင် မရတော့ဘူးနော်။ ကိုယ့်သုံးမယ့် Theme တွေကိုပြင်ထားရလိမ့်မယ်။ ဒါကတော့ ဗမာစာသုံးရင် အကုန်တော့ ပြင်တော့ပြင်ရတာပါပဲ ထူးတော့မထူးပါဘူး။:D
ကျနော့် blog .. <www.box02.info> ကိုမ၀င်ဖြင့်တာကြာပြီ .. ဒီနေ့ဖွင့်ကြည့်တာ ဘာဖြစ်လို့ မရလဲ မသိဘူး .. အခြားသူတွေရော ၀င်လို့ရရဲ့လားခင်ဗျာ ..
ဘာမှမလုပ်ရပဲ သူ့အလိုလိုနေရင်းထိုင်ရင်းဖြစ်တက်လားဗျား ..
DNS A record query failed ဗျ။ GoDaddy မှာ reg ပြီး 000webhost ကို Nameserver pointer ပေးထားတာတွေ့တယ်။ ဖြစ်တတ်တာက NS01.000WEBHOST.COM ပေါ်မှာ box02.info domain name အတွက် A record မရှိတော့ တာဖြစ်မယ်။ DNS setup လေးပြန်စစ်လို့ရရင် စစ်ကြည့်ပါအုန်း။ Free Service တွေက inactive record ဆိုရင် flush လုပ်ပြစ်တတ်တယ်။
ကျေးဇူးပါ ကို div :-) .. ခုလိုရှင်းပြတဲ့အတွက် .. ကျနော်လဲ အဲဒီဟာတွေကိုပြန်မစစ် ပြန်မကြည့်ရတာတောင် ကြာပြီး .. ကျနော်ပြန်စစ်လိုက်အုံးမယ်နော်